Muuri News Network » SAWIRRO: Ugaas Axmed iyo Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo casuumad rasmi ah u fidiyey Safiirka Jabuuti
SAWIRRO: Ugaas Axmed iyo Suldaan Ibraahim Cali Xaaji oo casuumad rasmi ah u fidiyey Safiirka Jabuuti
Waxaa maanta kulan qado sharaf wada qaatey Ugaas Axmed Ugaas Siidcali Ugaas Xuseen,Suldaan Ibraahim Cali Xaaji, iyo siyaasin matalayey beelaha Kale oo ka mid ahaa Mahad Salaad iyo Yuusuf Indha Caddd iyo marti sharaf kale ayaa waxaa casuumad rasmi ah u fidiyey Safiirka Dowlada Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Mudane Xaamud.
Kulanka ayaa waxaa loogu hadlayey sidii dib u heshiisin rasmi ah ugu dhaqan geli lahayd Gobolka Shabeelaha Hoose.
Dolwada Jabuuti oo marweliba Soomaaliya ku garab taagan iney heshiyaan ayaa hadana waxaa tusaale u ahaa sidii door muuqda ugu qaaten Dib u heshinta ka mid ahayd Dowladihii soo mara Soomaliya iyo tii hada ugu dhoweyd e ahyad Maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna oo dhowr sano kala irdheysnaa ayaa waxey dib ugu midooben Dalka Jabuuti waxaana Garwadeen buuxa ka ahayd Dowlada Jabuuti.
Safaarada Jabuuti ee Magaalada Muqdusho ayey ku kulmeen Mas.uliyatan iyagoona ka wada hadley xaaladaha iyo dhibaatoyinka dhabta ah ee ka taagan Gobolka Shabeelaha Hoose.
waxaa hadalka ku dheeradey oo ka mid ahaa marti sharafta lagu casuumey Safaarada Jabuuti Ex-Wasiir dowlaha Wasaarada Gaashaandhiga hadana Gudoomiyaha isku Dhafka Ciidaamada Dowlada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Xagaa.
Mudane Maxamed Cali Xagaa oo ku dheeraadey hadalka ayuu wuxuu ku nuuxnuuxsadey in uu wax badan ka qaban doono daryeelida Ciidamada iyo dhamaan inla qarameyn doono Ciidamada ku sugan Gobolka Shabeelaha Hoose.
sidoo kale Safiir Dalka Jabuuti Mudane Xaamud ayaa wuxuu kaloo sheegey in isaga iyo Madaxweynihiisa Ismaaciile Cumar Geele ay ogaan doonan wax dhabta ah ka taagan Gobolka Shabeelaha Hoose iyagoona bixin doona wixii qarash(Tasiilaad) ah oo ku baxaya dib u heshiisintaasi.
Ugaas Ahmed iyo Suldaan Ibraahim oo iyana dhankooda qaatey hadalka ayaa waxey ku dheeraden ka war bixinta iyo dhibaatoyinki uu soo marey Gobolka Shabeelaha Hoose tan iyo 2012dii.
ka dib waxaa hadalka qaatey marti sharaftana ka mid ahaa Prof Cabdilaahi Sheeq Ismaacile ayaa wuxuu ku nuuxnuuxsadey in lajoogo waqtigii biseylka nabada iyo in laga faaideysto dib u heshiisinta ay fidiyeen walaalhena jabuuti.
waxa isna dhankiisa so dhaweeyey dib u heshiisantasi Yuusuf Maxamed Siyaad indha cade ayaa waxuu sheegey in muhiim ay tahay in nabad miro dhal ah laga gaari doono guud ahaan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Mudane Xagaa ayaa wuxuu kaloo sheegey in xalwaara laga gaari doono Magaalada Marka iyo Guud ahaan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Safiir Xaamuud Safiirka Dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ayaa wuxuu sheegey inuu dardar gelin doono dib u heshiisiintaasi iyo inuu marna harsan doonin iyadoo aan xal laga gaarin guud ahaan Gobolka Shabeelaha Hoose.
dib u heshiisinta ayaa waxaa iyana dhinaceda ka qeyb qaadan doonta Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo xubnaha u metela Gobolka Shabeelaha Hoose ee ku jira Dowlada Federaalka Soomaaliya.
wixii faahfaahin dheeri ah kala soco Muurinews.com